[Kenya] oo dhistay 10km oo ah gidaarka xadka Soomaaliya, balse fadeexad ayaa ka taagan
Thursday March 14, 2019 - 20:26:43 in Wararka by Ali Adan
Waagacusub.com- Dowladda Kenya waxa ay markii hore ku dhawaaqday in ay darbi 700km ah ka dhisi doonto xadka ay la wadaagto Soomaaliya, si ay xuduudda u xirto isla markaana u hakiso dagaallameyaasha Al-Shabaab ee uga soo tallaabaya dhinaca Soomaaliya.
Waagacusub.com- Dowladda Kenya waxa ay markii hore ku dhawaaqday in ay darbi 700km ah ka dhisi doonto xadka ay la wadaagto Soomaaliya, si ay xuduudda u xirto isla markaana u hakiso dagaallameyaasha Al-Shabaab ee uga soo tallaabaya dhinaca Soomaaliya. Balse markii dhismaha la billaabay sannafkii 2015-kii, darbigii waxaa loo baddalay silig.
Xubno ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa aaminsan suurtagalnimada in saraakiishu ay ka faa'iideysteen halista la xiriirta Al-Shabaab, si ay u boobaan dhaqaalaha dowladda.
Qaarkoodna waxay su'aal ka keeneen sida loo hubi karo in darbigaas uu joojinayo khatarta Al-Shabaab ugana ilaalin karo dagaallameyaasha kooxdaas inay u soo gudbaan Kenya
Safiya Abdinuur oo baarlamaanka u matasha deegaanka Ijaara ayaa wareysi ay siisay BBC-da ku tidhi: "Annaga haddaan nahay xildhibaanadii laga soo doortay gobolkaas waxaan leenahay; 'ma jiro wax dhib ah oo noo dhaxeeya annaga iyo Soomaaliya, waxaan nahay dad walaalo ah oo uu xiriir fiican ka dhaxeeyo, marka innagoo uu heshiis iyo wanaag badan noo dhaxeeyo way adagtahay in darbi dhexdeenna laga dhiso', sidaas awgeed annagu ugu horreynba waan diidan nahay in darbiga la dhiso".
"Mas'uuliyiinta wasaaradda amniga u xilsaaran dalka ayaan hadda ka sugeynaa in naloo sharraxo meesha ay lacagta ku baxday iyo sida ay u isticmaaleen, labo wasaaradood ayaa hadda farta lagu fiiqayaa laakiin marka aan macluumaad buuxa helno unbaan eegi doonnaa tallaabada xigta", ayey tidhi Safiya Abdinuur.
"8 bilyan oo shilinka Kenya ah ayaa loo qoondeeyay mashruuca dhismaha darbiga xuduudda, hadda waxaa la sheegayaa in ku dhawaad 4 bilyan la isticmaalay masaafaha la dhisayna uu yahay 10km kaliya, marka arrintan waxay dhabar jab ku tahay difaaca waddanka", ayuu yidhi.
"Waxaa meesha ka maqneyd in dowladda Kenya ay wadatashi la sameyso dalalka darbiga noocaas ah horay looga sameeyay, sida Mareykanka iyo Mexico oo silig loo dhaxeysiiyay meelaha qaar, Israa'iil iyo Falastiin, Suuriya iyo Pakistan. Marka aad eegto dadka aqoonyahannada ah ee ku xeel dheer arrimahan waxay sheegayaan in waddamadaas aysan waxba ka faa'iidin darbiga la sameeyay", ayuu yidhi Dr Deerow.